Izingane imibhobho njengelinye lamazwe ethandwa kakhulu futhi kwafunwa amathoyizi ingane zanoma iyiphi iminyaka. Ngosizo kubo ungakha hhayi kuphela esimweni zemikhosi esiyingqayizivele, kodwa futhi ukuthuthukisa amakhono athile ekuculeni nokwenza amakhono. Kuze kube manje, i-choice amadivayisi Karaoke ukucula nawo njengomnyango mkhulu kakhulu. Wired, engenantambo, edilini lomshado, ukuqeqesha, njll Wezingane Musical Microphone ingasetshenziswa njengenhlangano ithoyizi ezithakazelisayo, noma ukuthuthukisa kanye ukuqoshwa kwezwi.
Inketho elula - interactive, uyakwazi ukudlala ezihlukahlukene amashuni. On ithoyizi emakethe yezingane, imibhobho ezinjalo zitholakala Umbala elikhanyayo ezimibalabala, ne cartoon abalingiswa. On kunjalo zikhona izinkinobho ezimbalwa, ngokuchofoza okuyinto ukukhiqiza kabusha ingoma edumile kusukela ikhathuni.
ezahlukeneyo Ukungaphathwa zifane umbhobho Okuyınqo, ifakwe eliphezulu ukuqoshwa kwezwi umsebenzi. Ungasetha umphumela ekushintsheni ithoni: ingane angakhuluma like irobhothi noma uhlamvu oluthile kusukela ama-movie opopayi. Amandla wumnikezeli amabhethri.
Kukhona futhi ongakhetha yokuxhuma i-DVD, amageyimu, ama-computer - uhlobo encane kunazo zonke futhi elula - olunezintambo. Ukuze okwangempela esiphezulu, abakhiqizi abaningi ukukhiqiza umbhobho zezingane maphambili ezinemibala egqamile. Noma yimuphi umntwana kuyoba ingajabule isipho esinjalo.
Imiphumela yesikhathi eside ezayo (mayelana 15 m) has a zezingane engenantambo umbhobho Karaoke hlobo. Bekanye bayidayise, nesamukeli. kudivayisi Umsebenzi kwenziwa amabhethri. Uma amabhetri flat, ungahlala uxhumana intambo izikhwebu. Uma wayefisa ukucula kanye nomntwana angakuthola imodeli twin-uhlobo ukwakhiwa okuyinto ngokuyisisekelo esifana umbhobho zezingane ngaphambili, kodwa kungenzeka ukuba Ukuxhuma amadivaysi amabili nje.
Lokhu ithoyizi kuyinto ezipheleleyo zabahlabeleli abasha. Wide lebanga lentengo kanye ezihlukahlukene design Ingaphandle kuzosiza ukhethe esifanele zonke ingane.
Abanye onobuhle anemisila ukuqoshwa kwezwi sici yezingane umbhobho ukuba ulalele yi emva ukucula. Umculo iza ngqo kusuka kudivayisi, ungalungisa hhayi kuphela umthamo kodwa futhi Tempo, okukuvumela ukuba uhlele amakhonsathi incendiary, ngaphandle kokushiya ekhaya. Ingane ngethoyizi uyozizwa inkanyezi wangempela yesehlakalo pop.
abakhiqizi abaningi engeza mayelana 10 amashuni ukuthi ingadlalwa ngokucindezela inkinobho ohambelana. Ukuze umntwana azizwa kanjani ngo indima microphone umculi sika sithuthukisa elizwakala kwezwi lakhe. Itholakala ezahlukene kumadivayisi yokubhalisa design, isibonelo, athandwa for girls:
"Inkosazana" kusukela "Disney".
Ukuze abafana ukufinyelela imodeli esibonisa ompetha, izinhlamvu ukusuka ifilimu animated "Izimoto." Uma ingane akanayo isikhathi ukukhumbula umbhalo yakuthanda iculo, ungakwazi kalula ulungise isivinini sokudlala umculo. kokuba abaqeqeshiwe kancane, umculi osemusha uqala ukuthola ijubane ukuze uhlele nabangani noma iqembu abazali superzazhigatelnuyu. Ivolumu inyuka ngezindlela ezimbili (kuye ngokuthi model) ngokusebenzisa izinkinobho noma isondo umqulu. Qedela nge ukuqopha umbhobho inhlukano samanje, AAA amabhethri, kanye incwadi nge isosha esihlatshelelwayo abhalwe idivayisi.
Isipho for abancane
Izingane imibhobho ezakhelwe izingane ezineminyaka engu-3 ubudala, izingane ephelele futhi izingane ezincane ngenxa kalula yayo ukusetshenziswa kanye nomklamo ekhangayo. omama abaningi uvumele lokhu ithoyizi ngenxa isifiso ingane ukudansa, ukucula ezihlekisayo iculo. Ngaphandle ingane isikhathi eside ngeke ahlukane nedivaysi ewusizo. I-microphone iphephile ngisho izingane ezincane, zonke izinga impahla, idivayisi Kulula, ne kuvunyelwe umsindo ezingeni, umsindo ngaphandle kokuphazanyiswa.
Ukuze kube lula ukusetshenziswa, abakhiqizi abaningi ukwenza inkinobho microphone ngemibala ehlukene ukuze ingane ngokushesha ukukhumbula injongo yabo. Ngokwesibonelo, oluhlaza ivuliwe / off amathoyizi, blue ikuvumela ukuba ukhethe umculo, pink - kokuhlaba ikhefu, futhi kuhlanganisa ihlombe ophuzi noma yimuphi omunye imiphumela ezithakazelisayo. inkinobho Purple ikuvumela ukuba uzwe izwi e yesifakwandlebeni, okuyinto ethandwa kakhulu nezingane.
Ukuthuthukisa nasekuqeqesheni imisebenzi
Izingane imibhobho, eyenzelwe izingane zasenkulisa, zihlanganisa amaculo owaziwa hhayi kuphela, kodwa futhi wokufundisa. amashuni Eziwusizo mayelana zamagama noma izinombolo, kukhona izinketho kusukela izinhlamvu ngesiNgisi. Propevaya incwadi ngayinye, ingane ngeke kuphela ukuthuthukisa izwi, kodwa futhi ngokushesha ngekhanda yonke zamagama.
onobuhle Iningi kukhanye uma udlala umculo ngemibala ehlukene. Uma lingasebenzi idivayisi ngokuzenzakalelayo kuvaliwe ukulondoloza amandla. Lokhu eyobonisa ihubo iDemo. Lokhu umbhobho izobiza ruble 500 kuphela, futhi ingane kumnandi bayothola isikhathi eside emva kokuthenga.
Yini uzokutshela inganekwane kusungulwe izingane? Indlela ukubhala zezingane inganekwane nengane yakho?
Indlunkulu eyinhloko yenhlangano yokuhlanganyela. Inhlangano ye-Underground e-USSR